CCI – Toliara : hapetraka ny tahirin-kevitra ho an’ny mpandraharaha | NewsMada
CCI – Toliara : hapetraka ny tahirin-kevitra ho an’ny mpandraharaha
Par Taratra sur 11/03/2016
Hametraka tahirin-kevitra, amin’ity volana marsa ity, ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria Toliara (CCI Toliara) mba hahalalan’ny mpandraharaha rehetra mahakasika ny CCI Toliara ny fifanarahana eo amin’ny Vovonan’ny tranoben’ny varotra eto Madagasikara sy ny banky BNI. Nampahafantatra izany ny filohan’ny CCI Toliara, Razafitombo Elijaona.
Voalohany amin’izany ny fanisana ny mpandraharaha rehetra ao anatin’ny faritra. Faharoa, ny fampahafantarana ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra, hamaritana ny vokatra ilaina eo amin’ny tontolon’ny tsena. Tanjona ny fampiroboroboana ny lalam-pihariana rehetra hahafahan’ny mpandraharaha mifantoka amin’ny vokatra azo amidy sy azo aondrana avy any atsimo. Hodinihina rahateo ny momba izany mandritra ny fihaonambe hatao any Taolagnaro amin’ny herinandro ambony io.
Nanamafy ny filohan’ny CCI Toliara, Razafitombo Elijaona, fa misokatra ao amin’io Antenimieran’ny varotra io, indrindra ny fitadiavana mpiara-miombon’antoka avy any ivelany. Hisy, araka izany, ny famelabelaran-kevitra isam-bolana hanamafisan’ny mpandraharaha ny traikefany sy ny lalan-kizorany.